Salomon Kalou ayaa laga yaabaa in uu Ivory Coast u sii ciyaaro ilaa iyo koobka Aduunka ee 2018 - BBC Somali
Salomon Kalou ayaa laga yaabaa in uu Ivory Coast u sii ciyaaro ilaa iyo koobka Aduunka ee 2018
Lahaanshaha sawirka ISSOUF SANOGO
Image caption Salomon Kalou (left) said he will cherish his Nations Cup memories
Ciyaar yahanka afka hore uga dheela Ivory Coast, Salomon Kalou ayaan dalkiisa mar kale uga qayb galidoonin koobka Qaramada Qaaradda Afrika ka dib markii dalkiisa laga reebay koobka Arbacadii, laakiin waxaa laga yaabaa in uu ka sii mid ahaado xulka qaranka si uu u dheelo Koobka Adduunka ee 2018ka.
Ciyaaryahankan oo 31 jir ah ayaa qaybta ciyaaraha ee BBC u sheegay in uusan Gabon kala kulmin natiijadii uu ka filayay uu intaas ku joojin doono ciyaaraha Koobka Afrika oo uu kooxda la qaaday 2015kii.
Wuxuu sheegay in uusan wali go'aansanin in uu ciyaaraha caalamiga ah oo dhan ka fariisto. laakiin uu hadda ku laaban doono naadiga uu u dheelo ee Hertha Berlin uuna qaadan doono wakhti uu go'aan ku gaaaro.
Ivory Coast ayaa u dhibca badan kooxaha ay uwada tartamayaan Koobka Adduunka ka dib labo ciyaaarood oo ay dheeleen, waxaana laga yaabaa in Kalou ay soo jiidatay in uu Koobka Adduunku ciyaaro markii saddexaad.
Kalou ayaa guud ahaan dalkii u dheelay 89 ciyaarood, wuxuu dhaliyay 28 ciyaarood.
Hadduu ka fariisto ciyaaraha caalamiga ah oo dhan waxaa jiilkii dahabka loo bixiyay kaga soo hari doona Ivory Coast, ciyaryahan Gervinho oo dhaawac uga haray Koobka Qaramada Afrika.
Xidigihii kale ee Didier Drogba, Didier Zokora, Kolo iyo Yaya Toure ayaa dhamaantood ka fariistay dhawrkii sano ee u dambeeyay.
Inkastoo uu caddaadis ka hasyto Ivory Coast sidii ay laacibiintaas u badali lahayd hadana Kalou wuxuu u arkaa in mustaqbalku uu nifayo.
Wuxuu sheegay in ay haystaan laaciib da' yar ah oo ay ka mid yihiin (Jonathan) Kodjia, (Franck) Kessie and (Wilfried) Zaha.